Fauna amin'ny tundra: toetra, toetrandro ary toetrandro | Green Renewable
Portillo Alemanina | 07/04/2022 12:00 | Tontolo_iainana
Eto amin'ny planetantsika dia misy tontolo iainana samihafa manana toetra miavaka izay mampiavaka ny zava-maniry sy ny biby izay mitombo ao aminy. Ny iray amin'ireo tontolo iainana hodinihintsika dia ny tundra. ny tundra fauna Izy io dia novolavolaina tao anatin'ny tontolo iray izay somary sarotra. Na izany aza, ny karazana dia afaka mampifanaraka ny tontolo iainana mba hivelomana sy hivoatra.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny toetra mampiavaka ny tundra biby, ny fomba hiainana sy ny fomba fiainany.
1 ecosystem tundra
2 bibidia tundra
3 Karazana tundra
3.1 tundra Arktika
3.3 tundra Antarctica
Azontsika atao ny mamaritra ny tundra ho biome izay tsy misy zavamaniry noho ny toetrandrony, satria faritra mivelatra avy any amin'ny faritra afovoan'ny tany izy ireo. Toerana saika tsy misy zava-maniry izany hatramin'izay miitatra any ivelan’ny faritry ny hazo izy io.
Na izany aza, noho ny andro mangatsiaka sy mando dia rakotra moka sy lichen ny tany, ary na dia ny hazo willow arctic aza dia naniry tany amin'ny toerana sasany. Izany dia noho ny fahavaratra, izay na dia fohy (tsy mihoatra ny roa volana), dia mangatsiaka kokoa noho ny ririnina, na dia mahalana aza izy ireo mihoatra ny 10 degre.
Hita fa tsy dia be ny orana eto, ka ny zava-maniry kely maniry dia afaka mamelona aina ka lasa sakafo ho an’ny biby tundra. Matetika izy ireo dia faritra fisaka misy ranomandry ao ambaniny, izay mety hahatratra 30 sm sy 1 m ny hateviny. Noho izany, ny rano amin'ireo toerana ireo dia tsy afaka tatatra, mihandrona, mamorona lagoon sy honahona Izy ireo dia manome ny hamandoana ilaina amin'ny fahaveloman'ny zavamaniry.
Miteraka triatra ara-jeometrika amin'ny tany ny fitohizan'ny fiempoana, ary any amin'ny toerana tsy manjavona ny ranomandry dia hita eny ambonin'ny tany ny nodules sy ny havoana. Mora ihany koa ny mahita toerana be vato rakotra lichen, izay ahafahan'ny biby isan-karazany hanana ny toeram-ponenany manokana.
Noho ny toetr'andro hafahafa ao amin'ny tundra, dia tsy maintsy miomana amin'ny hafanana ny biby, ka azo atao ny mahita karazana izay tsy hitantsika any amin'ny toerana hafa. Anisan'izany ny:
serfa: mandeha any tundra foana rehefa tonga ny fahavaratra fa tsy mahazaka ny hafanana any an-kafa. Ny tundra dia manome azy ireo ny toetr'andro hatramin'ny 10 degre.
Musk ox. Ankoatra ny anarany « Musk », dia misy fofona mahery izay mahasarika ny vehivavy azy. Izy ireo dia rakotra volo mavomavo mivolontsôkôlà izay mahatanty hafanana ambany ary mety hahatratra 60 sm ny halavany.
Aretin-trondro. Io bitro fotsy misy pentina mainty eo amin'ny sofiny lava dia toa bitro kokoa, saingy tsia, iray amin'ireo bitro lehibe indrindra eran-tany. Manana hoditra matevina izy io ary misy volo matevina sy malefaka izay miaro azy amin'ny hafanana ambany.
osy oram-panala: Karazana osy mahazatra hita ao amin'ny bibidia ao amin'ny tundra izy io, satria ny volony sy ny tanjany ara-batana no mahatonga azy io ho mety tsara amin'ny fiainana any amin'ny toetr'andro amin'ireo biome ireo.
Lemmings: biby mpikiky volom-biby kely izy ireo, ka noho ny fahalianana no holazainay aminao, fantatra amin'ny fironany hamono tena, ka manao izany miaraka amin'ny fanariana ny tenany any an-dranomasina.
Ho fanampin'ireo biby ireo, dia hita ao amin'ny biby tundra ny karazam-biby mahazatra hafa toy ny orsa, amboadia, voromahery, vorondolo; ao anaty rano, trondro toy ny salmon. Ankoatra ny biby ao amin'ny tundra, dia misy zavamaniry lehibe iray, ahitana ahitra sy kirihitra kely indrindra, noho ny hamandoana noforonin'ny ranomandry ambanin'ny tany.
Azontsika atao ny mametraka azy io any amin'ny ila-bolantany avaratra eo ambanin'ny satrobonin'ny ranomandry Arktika, manomboka amin'ny faritany tsy azo idirana ka hatrany amin'ny sisin'ny taiga voafaritry ny taiga. Amin'ny sarintany, dia ny antsasaky ny Kanada sy ny ampahany betsaka amin'i Alaska.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka mahita isika sosona tany ambanin'ny tany mangatsiaka, antsoina matetika hoe permafrost, izay vita amin'ny fitaovana tsara kokoa ny ankamaroany. Rehefa mameno ny tany ambony ny rano, dia miforona ny fotaka sy dobo, manome rano ho an'ny zavamaniry.
Ny zavamaniry tundra Arktika dia tsy manana rafitra faka lalina, fa mbola misy karazana zavamaniry mahatanty ny andro mangatsiaka: kirihitra ambany, mosses, sedges, kankana, ary ahitra... sns.
Ny biby dia ampifanarahana amin'ny ririnina lava sy mangatsiaka ary miteraka ary mihamaro haingana amin'ny fahavaratra. Ny biby toy ny biby mampinono sy ny vorona koa dia manana insulation matavy fanampiny. Biby maro no matory rehefa ririnina noho ny tsy fahampian-tsakafo. Safidy iray hafa ny mifindra monina any atsimo amin'ny ririnina, toy ny ataon'ny vorona.
Noho ny hafanana mangatsiaka be, Vitsy na tsy misy ny biby mandady sy ny amphibiana. Mihozongozona hatrany ny mponina noho ny fifindra-monina sy ny fifindra-monina tsy tapaka.
Any amin'ny faritra be tendrombohitra no misy azy na aiza na aiza eto amin'ny planeta, amin'ny haavo lehibe ambonin'ny haabon'ny ranomasina, ary tsy misy hazo maniry mihitsy. Ny vanim-potoanan'ny fitomboana dia 180 andro eo ho eo. Ny mari-pana amin'ny alina dia matetika ambanin'ny hatsiaka. Tsy toy ny tundra Arktika, ny tany any amin'ny Alpes dia tondraka tsara.
Ireo zavamaniry ireo dia tena mitovy amin'ny hita any amin'ny Arktika sy Ahitana zava-maniry ahitra toy ny ahitra, hazo madinika misy raviny sy hena, hazo dwarf. Ny biby miaina ao amin'ny tundra alpine dia azo ampifanarahana tsara ihany koa: biby mampinono toy ny marmot, osy, ondry, vorona mafy volony, ary bibikely toy ny voangory, valala, lolo, sy ny maro hafa.
Iray amin'ireo zavaboary tundra tsy fahita firy izy io. Hitantsika izany any amin’ny Nosy Géorgie Atsimo sy Sandwich Atsimo, izay anisan’ny Faritany Britanika, ary koa any amin’ny Nosy Kergallen sasany.
Noho ny haavony sy ny akaiky azy amin'ny bao, Ny toetr'andro tundra dia hijanona eo ambanin'ny hatsiaka mandritra ny ankamaroan'ny taona, eo amin'ny 6 ka hatramin'ny 10 volana. Aoka hotsaroantsika ireo singa tsy misy aina, toy ny tany na tany, tendrombohitra, rano, atmosfera, sns. Antsoina hoe biome izany ary mahaliana ny mianatra.
Amin'ny ankapobeny, ny ririnina tundra dia lava, maizina, mangatsiaka be ary maina, mahatratra hatramin'ny -70 degre Celsius amin'ny faritra sasany. Na dia misy lanezy aza ny tany amin'ny ankamaroan'ny taona, dia misy rotsak'orana maivana miseho amin'ny endriky ny lanezy mandritra ny fahavaratra, rehefa mihena ny mari-pana.
Any amin'ny faritra extreme, ny mari-pana eo ho eo -12 ka hatramin'ny -6 degre Celsius. Amin'ny ririnina dia mety hahatratra 34 degre santimetatra izy ireo, fa amin'ny fahavaratra dia mahatratra -3 ºC izy ireo. Raha miresaka momba ny tendrombohitra avo na tendrombohitra isika, amin'ny fahavaratra dia mety hahatratra 10 degre Celsius izy ireo, fa amin'ny alina dia ho latsaka ambanin'ny zero izany mba hiarovana ny tenany.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny biby ao amin'ny tundra sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » bibidia tundra